News - ပိုးကင်းအဆင့်နိုက်ထရိုင် / စေးလက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု
Sterilization grade လက်အိတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် -
၁။ နိုက်ထရိ / စေးလက်အိတ်များသည်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းမှဖယ်ထုတ်ပြီးသည့်နောက်စက်ကိုရေတွက်သည်၊ လက်ဖြင့်အိတ်ထဲထည့်ပြီးနောက်ထုပ်ပိုးပြီးနောက်ပိုးသတ်ရန်အတွက်အီသလင်းအောက်ဆိုဒ် sterilization ပစ္စည်းသို့ပို့သည်။ ထိုသို့သောလက်အိတ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်သာမန်စစ်ဆေးရေးလက်အိတ်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၂။ နိုက်ထရိုင် / စေးလက်အိတ်များကိုလက်မှိုမှအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားပြီးနောက်၎င်းတို့သည်နိုက်ထရိုင်း / စေးလက်အိတ်များမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအညစ်အကြေးများကိုဆေးကြောခြင်း၊ လှည့်ဖျားခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့စေခြင်းပြီးနောက် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် aseptic အလုပ်ရုံသို့သွားသည်။ အိတ်များအတွက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်လက်ဝှေ့ထိုးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အီသလင်းအောက်ဆိုဒ်ပိုးကင်းသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိုးသတ်ရန်ပို့သည်။
Ethylene oxide ပိုးသတ်ခြင်းသည်လက်အိတ်ပိုးသတ်ခြင်းအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အောက်ပါ Ethylene oxide ပိုးသတ်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကို:
Ethylene အောက်ဆိုဒ် sterilizer ၏ 1. Sterilization နိယာမ
အဆိုပါသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ကို "alkylation" ဟုခေါ်သည်
ပရိုတိန်းနှင့်ဒီအင်အေပတ္တာများဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့်ပရိုတိန်းနှင့်ဒီအင်အေပတ္တာများ၊ သန့်စင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ပရိုတိန်းဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပရိုတိန်းနှင့်ဒီအန်ပင်းများ၊
2. ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် EO Ethylene အောက်ဆိုဒ်၏ပိုးကင်းယန္တရား
EO Ethylene အောက်ဆိုဒ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ်: 10.8 ℃
အန္တရာယ်: Ethylene oxide သည်လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီးလေနှင့်အတူရောနှော။ ပေါက်ကွဲနိုင်သောအရောအနှောဖြစ်စေနိုင်သည်။ မီးပွားများနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်များနှင့်ထိတွေ့သောအခါပေါက်ကွဲလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့လည်းဖြစ်သည်။
3. Ethylene oxide ၏ပိုးသတ်ထိခိုက်အဓိကအချက်များ
Ethylene အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှု - များသောအားဖြင့် 400 မှ 800mg / L ဖြစ်သည်
စိုထိုင်းဆ - ပုံမှန်အားဖြင့်ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆကိုရည်ညွှန်းသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀% ထက်နည်းသော RH); အီသလင်းအောက်ဆိုဒ်နှင့်အဓိကဆဲလ်မော်လီကျူးများ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ် (alkylation ဖြစ်စဉ်) သည်ရေလိုအပ်သည်; ကပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းတစ် ဦး ဓာတ်ငွေ့ရောနှောပြည်နယ်အတွက်တည်ရှိ။
အပူချိန် - အပူချိန်တိုးလာခြင်းနှင့်အတူပိုးကင်းမှုနှုန်းသည်မြင့်တက်လာမည်။ အပူချိန် ၁၀ by တိုးတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်အထူးဖော်စပ်ထားသည့်ပမာဏသည်နှစ်ဆတိုးလေ့ရှိသည်။
အချိန် - ထိတွေ့မှုတိုးချဲ့ခြင်း (ဥပမာ - EO နေထိုင်မှုအချိန်) နှင့်အတူပိုးကင်းနှုန်းတိုးလာလိမ့်မည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး - လွှဲပြောင်း - ကန ဦး စုပ်စက် - ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်း - အစိုဓာတ်ထိုး / ဖိအား - ဓာတ်ငွေ့ထိုး - EO Residency-Post စုပ်စက် - ပွတ်တိုက် - ဖြန့်ချိ - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း